केपी ओलीलाई हेप्ने?सक्छौ भने केपी ओलीले जस्तो काम गरेर देखाउ सक्छौ :गोकुल बास्कोटा – Nepali Janata Khabar
केपी ओलीलाई हेप्ने?सक्छौ भने केपी ओलीले जस्तो काम गरेर देखाउ सक्छौ :गोकुल बास्कोटा
काठमाडौं, २३ चैत्र । नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुअघिसम्म नेपालको राजनीति राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित रहेको भएपनि सरकार बनेपछि विकास र समृद्धि प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले वर्तमान सरकारले पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिएको विश्वास दिलाए । उनले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु आखिर के चाहन्छन् ? भन्दै प्रश्नसमेत राखे । उनले भने,‘यत्तिकै विरोधको लागि विरोध गरिने कुराले हामी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं ।
त्यसकारण तथ्यतर्फ जाऔं । विकास नगर्ने हो भने दलको आवश्यकत्ता किन ?’ उनले आफूहरु संसारसँग सँगै हिँड्न चाहेको पनि उल्लेख गरे । किसुनजीले देखेको सपना ३० वर्ष पूरा भएको भन्दै उनले उनीप्रति साधुवाद व्यक्त गरे ।
उनले वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ भनिएको आपत्ति जनाए । अर्को सरकार बनाउनको लागि कुनै एजेण्डा पेश गर्न नसकेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भूमिकाप्रति आलोचना पनि गरे । उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसमेत माओवादीलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने,‘आँफै अड्काउने, आँफै पड्काउने काम नगरौं ।’ उनले जनताको विचमा जानु प्रतिगमन हुन्छ भने अग्रगमन के हो त ? भन्ने प्रश्नसमेत तेर्साए । उनले यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थितिको सही मूल्यांकन र विश्लेषण गरेर नै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको र अहिले उक्त निर्णय सही सावित भएको पनि जिकिर गरे ।
काठमाडौं भित्रिने नाकामा शंकास्पद व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण हुने…
बिश्वमा यस्तो अनौठो मन्दिर पनि छ जाहा मागेको कुरा २४ घण्टा भित्र पुरा हुन्छ, ॐ लेखि शेयर गरौ